गणेश कुमार राई, गाउँले न्युज, सोलुखुम्बु । माप्य दुधकोशी गाउँपालिका–६ सोलुखुम्बुमा हालै मात्र दर्जनौंको संख्यामा नेपाली कांग्रेसबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित सदस्यसहित नेपाल कम्यसनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा प्रवेश गरेका छन् । लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसमा रहेर कार्य गरेको भए पनि उसले नागरिकको हितमा काम नगरेकाले नेकपामा प्रवेश गरेको उनीहरुले बताएका छन् । टोलका करिब २९ घरले एक साथ नेकपामा प्रवेश गरेका हुन् ।
तर मिनबहादुर कार्कीको हस्ताक्षर रहेको प्रेस वित्रप्ति जारी गर्दै नेपाली कांग्रेसको वडा कमिटीले उक्त कुरा झुठो रहेको बताएको छ । साथै वडा सदस्यको हस्ताक्षर र ल्याप्चे रहेको विज्ञप्ति समेत जारी भएको र उक्त विज्ञप्तिमा आफूलाई जबर्जस्ती प्रवेश गराएको बताइएको छ ।
प्रवेश गरेको कुरा झुठो नै हो त ?
गएको स्थानीय निर्वाचनमा दलित महिला सदस्यको कोटाबाट माप्य दुधकोशी गाउँपालिका वडा नं. ६ मा वडा सदस्यका रुपमा कुमारी विक निर्वाचित भएका थिए । उनी नेपाली कांग्रेसबाट विजयी बनेका हुन् । तर केही दिनअघि उनले आफ्नो टोलसहित नेकपामा प्रवेश गरेको समाचार र तस्वीर सामाजिक संजालमार्फत र अनलाइन पत्रिकाहरुमार्फत सार्वजनिक भयो ।
त्यसको लगत्तै नेपाली कांग्रेसको वडा कमिटीले कुमारी विकको विज्ञप्तिलाई आधार मान्दै गम्भीर आपति रहेको जनायो ।
विज्ञप्तिका सन्दर्भमा वडा सदस्य कुमारी विकले भने– ‘नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले गए पनि उनीहरुको खुसी हो, तर कुरा गर्न चाहिँ आवस है भनि घरमा खबर छोडेका रहेछन् । अनि म गएँ । म हतारमा भएकाले लेख्दै गरेको कागजमा साइन गरिराख भने । के लेखेको हो भन्ने पनि मलाई भनेन् । अनि मैले साइन गरेर हिँडेको हुँ । र पार्टी प्रवेश त गरेकै हो । टोलले नै प्रवेश गरेपछि हामी एक्लै हुने कुरै छैन ।’
टोलले नै किन प्रवेश गर्नुपर्‍यो त ?
उक्त टोलमा रहेको सिर्जशील युवा क्लवका अध्यक्ष रामबहादुर विकले भने– ‘हामीले नेपाली कांग्रेसमा रहेर धेरै नै गर्‍यौं । तर हामीलाई जहिल्यै पछाडि पारियो । बलबहादुर केसीको पालादेखि अहिलेसम्म हामीले सयौं निवेदनहरु दियौं । तर हाम्रो कुनै पनि माग पूरा भएन । त्यसैले हामीले पार्टी परित्याग गर्नुको विकल्प रहेन ।’
नेपाली कांग्रेसबाट वडा अध्यक्षको उम्मेद्वारले निर्वाचनको बेला ‘आफ्नो सेवा सुविधा जति आउँछ, त्यसबाट दलित वालवालिकालाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्छु’ भनि आश्वासन देखाएका थिए । तर उनले अहिलेसम्म एक सुकाको पनि आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गरेका छैनन् । रामबहादुरले भने– ‘उहाँले यहाँका सबै वालबच्चालाई यहीँ सगरमाथा माविमा आफ्नो सेवासुविधाबाट निशुल्क पढाइदिने भन्नुभयो । तर अहिलेसम्म एक सुका पनि दिनुभएको छैन । कृषि वा पशुपालन तालिम हुँदा पनि हामीलाई खबर गर्नुहुन्न । हामीलाई चरम भेदभाव गरिएको छ ।’
त्यसैगरी अर्का अगुवा हर्कबहादुर विकले पनि ‘नेपाली कांग्रेसको विरोध गरेर होइन, न्याय खोज्ने क्रममा नेकपामा प्रवे गरेको’ बताए ।
नारायणगढको यातायात व्यवस्थापन अस्तव्यस्त
ज्ञानेन्द्रलाई पनि बोल्ने अधिकार छ, उनले त्यही अधिकार प्रयोग गरेका हुन्ः टोपबहादुर रायमाझी
अपहरणमा संलग्न प्रहरी जवानसहित पाँचजनालाई कैद